ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အမေရိကန်ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများလူပျိုဖြစ်ရမယ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 17 2021 | < 1
ထိုစဉ်ဆက်မပြတ်အီးမေးလ်များနှင့်အတူ, ကြေငြာချက်များ, အသစ်သောဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. Facebook ကသတိပေးချက်များကို, လက်ထပ်ထိမ်းမြား, နှင့်ကိုယ်ဝန်, လူတိုင်းကိုရှာတွေ့ပြီဆိုရင်ကြောင့်ဟန် “တဦးကို”. ပင်တွေကိုဘားမှထွက်လူတိုင်းပယ် coupled မူလျှင်အဖြစ်ဟန်သင်တို့မူကား,. ဒီအလိုမကျမှုနှင့်အတူငါတို့သည်သင်တို့စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတာသိ, “အဘယ်အရပ်ရှိသမျှတို့သည်တစ်ခုတည်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏?”
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Rent.com ဆိုရင် single ရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အချက်အလက်များကိုစုစည်းထားပါတယ်. သဘာမှ unattached အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကနေဘေးကင်းလုံခြုံရာကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖျော်ဖြေမှု, ဒီစစ်တမ်းထိပ်ကိုတွေ့ရှိ 10 တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအမြို့မြို့.
1. San Francisco က, အတူကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် 38% တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းလူဦးရေရဲ့
2. မန်ဟက်တန်, နယူးယောက်, 38% တခုတည်းသော
3. 38% ဝါရှင်တန် D.C. လူဦးရေရဲ့တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ပါသည်
4. 33% ဘော်စတွန်ကိုယ်စားပြုတယ်, မက်ဆာချူးဆက်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောလူဦးရေ၏
5. ဆီယက်တဲလ်, ဝါရှင်တန်, နှင့် 30% Singleton
6. 26% Philadelphia တွင်, Pennsylvania ပြည်နယ်၏လူဦးရေတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါသည်
7. Minneapolis, မင်နီဆိုတာ, 25% တခုတည်းသော
8. 24% Portland အတွက်လူဦးရေရဲ့, အော်ရီဂွန်တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်
9. 23% နယူးဂျာစီပြည်နယ်မြို့တော်, နယူးဂျာစီပြည်နယ်ဆိုရင် single ကိုကိုယ်စားပြုတယ်
10. ချီကာဂို, နှင့်အတူအီလီနွိုက်ပြည်နယ် 23% ၎င်း၏လူဦးရေရဲ့တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ခြင်း
ဟုတ်ပါတယ်, ထိုမြို့နှင့်ကိန်းဂဏန်းများကို သိ. ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်လက်ျာမြင်ကွင်းတစ်ခုရှိကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင်ထုတ်ကြောင်းအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဒေသခံပွဲတော်များမှညဉ့ trivia ပျော်ရွှင်မှနာရီအနုပညာပြတိုက်မှ bars တွေကိုငုပ်မှနိုက်ကလပ်ထဲကနေ, အားလုံးတစ်ဦးချင်းကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းကိုထိုမြို့အိမ်တော်သည်ကြီးကွင်းများမှာ. ဒေသခံတစ်ဦးကတက္ကသိုလ်မှာညဉ့်ကိုအတန်းတက်လက်မှတ်ထိုး, ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြစ်ရပ်များသွား, သို့မဟုတ်လူငယ်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအုပ်စုလိုက်လာရောက်ပူးပေါင်းကြရှာဖွေရန် ပို. နည်းလမ်း “တဦးကို”.